Nei Tichipinda Misangano paImba yeUmambo? | Vechidiki Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Baoule Batak (Karo) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Mozambique) ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKalanga (ChekuBotswana) ChiKaren (S'gaw) ChiRomani (ChechiVlax, Russia) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabuverdianu Kachin Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khakass Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Low German Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mingrelian Mixtec (Guerrero) Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustria Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuIsrael Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Persian Pidgin (West Africa) Polish Pomeranian Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Argentina) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Ronga Russian Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Nei Tichipinda Misangano paImba yeUmambo?
Zvapupu zvaJehovha zvinoita misangano kaviri pavhiki panzvimbo dzinonzi Dzimba dzeUmambo. Chii chinoitwa ipapo, uye uchabatsirwa sei kana ukapindawo?
Chii chinoitwa paImba yeUmambo?
Nei uchifanira kupindawo?
PaImba yeUmambo ndipo panotsanangurwa mazano anobatsira anobva muBhaibheri. Misangano inoitwa ipapo inogona kukubatsira:
kudzidza chokwadi nezvaMwari.
kunzwisisa zvinhu zviri kuitika munyika.
kuti uve munhu anoita zvakanaka.
kuti uwane shamwari dzakanaka.
Waizviziva here? Nzvimbo inoitirwa misangano neZvapupu zvaJehovha inonzi Imba yeUmambo nekuti panonyanya kutaurwa nezveUmambo hwaMwari.​—Mateu 6:9, 10; 24:14; Ruka 4:43.
Zvinodzidzwa ipapo zvinokubatsira. Mazano eBhaibheri anokurukurwa pamisangano yeZvapupu zvaJehovha anokubatsira kuti ‘uwane uchenjeri.’ (Zvirevo 4:5) Izvi zvinoreva kuti Bhaibheri rinogona kukubatsira kuti uite zvisarudzo zvakanaka muupenyu. Rinogonawo kukubatsira kuti upindure mibvunzo mikuru yeupenyu, kusanganisira inotevera:
Chinangwa cheupenyu chii?
Mwari ndiye anoita kuti titambure here?
Dzimwe hurukuro dzinokurukurwa pamisangano yatinoita pakupera kwevhiki dzine misoro inotevera:
Nei Uchifanira Kutungamirirwa neBhaibheri?
Ungawanepi Rubatsiro Munguva Dzenhamo?
Zvatiri Kuitirwa neUmambo hwaMwari Iye Zvino.
“Mumwe wandaidzidza naye akauya kumisangano yedu. Akagara nemhuri yedu, uye takaona pamwe chete naye mabhuku ataishandisa. Tapedza, akandiudza kuti akabayiwa mwoyo nemhinduro dzaipiwa nevanhu pazvikamu zvaida kuti vateereri vapindure. Akataurawo kuti kuchechi kwavo havana zvinhu zvekudzidza zvakanyatsorongwa sezvatinoita.”​—Brenda.
Waizviziva here? MuImba yeUmambo unogara chero paunoda, uye hapana ndiro yemari inofambiswa.
Uchakurudzirwa nekushamwaridzana nevamwe. Bhaibheri rinotaura kuti chimwe chezvikonzero zvinoita kuti vaKristu vaungane ndechekuti ‘vakurudzirane.’ (VaHebheru 10:24, 25) Ushamwari hwakanaka hwevanhu vanoda Mwari uye vanoda vamwe kupfuura kuda kwavanozviita, hunozorodza munyika ino ine vanhu vanongoda kuita zvakavanakira.
“Kana ndikaswera ndichishanda, ndinosuruvara uye ndinonzwa ndaparara, asi vanhu vanenge vari paImba yeUmambo vanoita kuti ndinzwe zviri nani. Pandinenge ndiri munzira kubva kumusangano, ndinonzwa kufara uye ndinonzwa ndagadzirira zuva rinotevera.”​—Elisa.
Waizviziva here? Pasi rese pane ungano dzeZvapupu zvaJehovha dzinopfuura 120 000, dzinoungana panzvimbo dzekunamatira dzinopfuura 60 000. Gore rega rega, paavhareji Dzimba dzeUmambo dzinenge 1 500 dzinovakwa kuitira vanhu vanenge vachiwedzera. *
“Pandaiva kusekondari, ndakaenda kune mimwe misangano yedu nemumwe wandaidzidza naye, uye akabayiwa mwoyo paakaona mazera akasiyana-siyana achidzidza Bhaibheri pamwe chete. Munguva ichangobva kupfuura, munhu wandinoshandira akauyawo, uye akashamiswa paakaona kuti Bhaibheri ndiro rainyanya kushandiswa. Zvakanaka zvaaitaura nezvemusangano zvakaita kuti ndiwedzere kuikoshesa!”​—Jessica.
“Ndinoona kuti misangano inoita kuti ndibvise pfungwa dzangu pazvinhu zvinotemesa musoro zvinenge zvaswera zvichiitika. Tinodzidza zvatingaita kuti tive neupenyu hunogutsa, zvatingaita kuti tive vanhu vakanaka, nezvimwewo zvakawanda. Nguva dzese ndinobva paImba yeUmambo ndakurudzirwa uye ndazorodzwa.”​—Timothy.
“Murume wandainge ndakoka akati pashure pemusangano: ‘Ndangouya kuti ndikuratidze kuti zvamunodzidzisa hazvisi zvechokwadi. Asi ndazoona kuti zvandinotenda ndizvo zvisiri zvechokwadi!’ Akabayiwa mwoyo neushamwari hunoratidzwa neZvapupu zvaJehovha. Akati: ‘Kunyange zvazvo kari kekutanga kuonana nemi, mandibata sekunge tava nemakore tichizivana!’”​—Jacob.
“Pane pamwe pandinombofunga kuti, ‘Musangano uchingopera, ndobva ndaenda.’ Asi musangano paunenge uri pakati, pfungwa yacho inobva yatobuda. Pandinenge ndichitaura nevanhu musangano wapera, ndinotozoshaya kuti chii changa chamboita kuti ndifunge zvekukurumidza kuzoenda. Kudai ndisingapindi misangano, ndingadai ndisina shamwari dzakanaka dzandiinadzo iye zvino.”​—Madison.
^ ndima 20 Kuti uwane nzvimbo inopindirwa misangano, enda paindaneti papeji yakanzi ““Misangano Yedu Yeungano” wobaya pakanzi “Tsvaga Nzvimbo Iri Pedyo Newe.”
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Nei Tichipinda Misangano paImba yeUmambo?
ijwyp nyaya 76